Bedrock Linux: Linux Metadistribution mahafinaritra tsy mahazatra | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny fanontana maro an'ny Internet ary ny Blog FromLinux nanjary nazava taminay, ny habetsaky ny tolo-kevitra, ny safidy hafa ary ny fampiasana izany GNU / Distros Linux afaka mahatratra izy ireo. SY fototry Linux dia ohatra tsara amin'ireo fetra ireo.
fototry Linux dia fampandrosoana manaitra ny Free Software amin'ny endrika Metadistribution GNU / Linux izay mamela ny mpampiasa azy amin'ny ankapobeny ankafizo ireo fiasa maro samihafa, fampiasa na tombontsoa azo avy amin'ny fizarana GNU / Linux isan-karazany, izay matetika mazàna "Mifanaraka", izany hoe tsy mifanaraka, indrindra amin'ny resaka fonosana sy baiko.
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, fototry Linux es:
"Ufizarana meta-Linux izay mamela ny mpampiasa hampiasa endri-javatra amin'ny fizarana hafa, matetika tsy misy ifandraisany. Amin'ny ankapobeny, miaraka aminy ny mpampiasa dia afaka mifangaro sy mampifanaraka singa arak'izay tiana".
Fa inona marina no dikan'izany?
Midika izany fa, ohatra, ary ny tranga azo ampiharina hitrandrahana ato amin'ity lahatsoratra ity dia afaka manana a Fitsinjarana GNU / Linux MX Linux 19 o DEBIANINA 10, hametrahana fototry Linux, ary amin'ity farany ity, mampiantrano Distro hafa mifanaraka na tsia, toy ny Arch Linux, ao anatin'ny karazana kaontenera antsoina hoe sosona.
Na izany aza, fototry Linux amin'ny ankehitriny anao kinova fampandrosoana, la kinova laharana 0.7, manohana ny fametrahana ny GNU / Distros Linux manaraka: alpine, arch, centos, debian, devuan, exherbo, exherbo-musl, fedora, gentoo, ubuntu, void, ary void-musl.
1 fototry Linux
1.1 Inona koa no hain'ny Bedrock Linux?
1.2 Ahoana ny fametrahana Bedrock Linux amin'ny MX Linux 19 sy / na DEBIAN 10?
Inona koa no hain'ny Bedrock Linux?
Amin'ny antsipiriany iray dia afaka mametraka fototry Linux amin'ny Distro maoderina ary mahazoa azy mora foana:
Ampiasao ny fizarana CentOS na DEBIAN taloha.
Ampidiro ny Arch Linux ary avelao ny fidirana amin'ireo fonosana manaraka na AUR repos.
Afaka mandeha ho azy ny fanangonana fonosana miaraka amin'ny portage Gentoo.
Mahazoa fampifanarahana famakiam-boky amin'ny Ubuntu, toy ny rindrambaiko miorina amin'ny birao voatendry.
Hahatanteraka ny fitoviana amin'ny tranomboky CentOS, toy ny rindrambaiko miasa / mpiorina miompana amin'ny mpiorina.
Anisan'ireo zavatra maro azo atao. Amin'izay mba, fototry Linux amin'ny ankapobeny dia manome hery hankafizanao izany rehetra izany, miaraka amin'izay, amin'ny a "Rafitra miasa mafy".
Ahoana ny fametrahana Bedrock Linux amin'ny MX Linux 19 sy / na DEBIAN 10?
fototry Linux manohana amin'ny fomba ofisialy ny fametrahana azy amin'ny a Fitsinjarana GNU / Linux DEBIAN, ao anatin'izany ny kinovany ankehitriny, izany hoe kinova 10 (Buster). Na izany aza, tsy manohana amin'ny fomba ofisialy ny fametrahana azy amin'ny MX Linux, ao amin'ireo kinova misy azy. Saingy, ho an'ny tranga azo ampiharina, araka ny efa nolazainay teo aloha, hapetraka amin'ny a fizarana MX Linux 19.1, 64-bit, izay mifototra amin'ny DEBIANINA 10.
Sintomy ary atsaharo ny Script Installation ho an'ny DEBIAN Distributions - 32/64 bits
Zahao ny tutorial na boky momba ny fampiasana misy an'ny Bedrock Linux
Midira fanampiana ho an'ny safidin'ny baiko Bedrock Linux sy ny masontsivana
Mandehana baiko ifotony amin'ny Bedrock Linux
Tanisao ireo Distros GNU / Linux azo apetraka
Mametraka GNU / Linux Arch Distros
Hamarino ny baiko na fonosana isaky ny Distro (Base sy atiny)
Ohatra iray amin'ny fanatanterahana baiko amin'ny Arch Distro napetraka miaraka amin'ny Bedrock Linux
Vaovao farany base Arch
Mametraha fonosana isan-karazany amin'ny base Arch
Amboary ny rakitra fikirakirana repositories hanampiana Arch AUR Repos
Ampio ity sombin-tsoratra manaraka ity amin'ny faran'ny fisie config:
Tehirizo ary mivoaha ny fisie config.
Mametraha fonosana Arch AUR Repos miaraka amin'ny git
Raha ny momba ny Arch sy ny mety ho Distros hafa hapetraka dia izy ireo sary fototra fametrahana farafahakeliny, azo antoka fa tsy maintsy nisy izany nohamarinina sy namboarin'ny mpampiasa hahatratra ny fampiasana voalanjalanja sy mivaingana amin'izy ireo, amin'ny alàlan'ny fametrahana fonosana sy fanatanterahana fanaingoana maro ao anaty rakitra fisie.
Ho fanohanana anay amin'ny fametrahana ny fototry Linux azonao zahana izao manaraka izao rohy, ary hijerena inona GNU / Distros Linux dia azo ampiasaina hanatanterahana ny fametrahana azy, ity manaraka ity rohy. Ary raha te hahalala izay script fametrahana ao amin'ny kinova 0.7 misy, ireto manaraka ireto rohy.
Aorian'ireto dingana ireto dia azonao atao ny miatrika Arch Linux milamina amin'ny tsiron'ny mpampiasa, avy amin'ny MX Linux 19 o DEBIANINA 10, mampiasa fototry Linux.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba an'io mahafinaritra sy mahira-tsaina io «Distro Linux» antso «Bedrock» inona no manolotra antsika hankafizintsika «lo mejor de muchas distros» amin'ny tokana, dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Bedrock Linux: Linux iray metadistribution mahafinaritra tsy mahazatra
Mahavariana, liana be aho amin'ity fahaizana miaraka MInt sy Centos ity, mivantana amin'ny faborito.
Lahatsoratra mahafinaritra, misaotra.
Salama manao ahoana ny fahasalamanao dia hoy izy:
afa-po tsara brooo
Valiny tamin'i Holaqtal
Helloqt3al dia hoy izy:
afa-po tsara brro3oo
Mamaly an'i Holaqt3al